MailButler: N’ikpeazụ, Onye nnyemaaka maka Apple Mail na Rocks! | Martech Zone
Ka m na-ede ihe a, anọ m ugbu a na akwụkwọ ozi hell. Enwere m ozi ịntanetị na-agụghị 1,021 na azịza m na-abụghị nke na-agafe n'ime ozi ziri ezi site na mgbasa ozi mmekọrịta, oku ekwentị, na ozi ederede. M na-ezipụ ihe dị ka 100 email na-enweta ihe dị ka 200 email kwa ụbọchị. Ma nke ahụ abụghị gụnyere ndebanye aha na akwụkwọ akụkọ m hụrụ n'anya. Igbe mbata m enweghị njikwa na igbe efu dị ka ezi uche ka m dị ka pink dinosaur.
Ejirila m ọtụtụ ngwaọrụ iji nyere aka na enwere m nkụda mmụọ mgbe niile, na-atụgharị ha niile wee laghachi Apple Mail nke ọkọlọtọ ya, ihe nzacha ya, yana ndepụta VIP bụ mkpịsị aka m na-eji iji gbochie mmiri ahụ. Ma, ezughị. M ka na-enwe nkụda mmụọ. Achọrọ m ijikwa ebili arịrịọ ka mma. Amaara m na n'ime narị narị ozi email ọ bụla, enwere ohere ọ bụla na di na nwunye na m kwesịrị ịnọ n'elu.
Ihe dị ka otu izu gara aga, Thaddeus Rex, a ika ọkachamara nke ahụ na-arụ ọrụ anyị na ndị ahịa nwere ike ma ọ bụ na ha agabeghị m n'ihu ọha na-akwa ákwá n'ihu igbe mbata m, mee ka m mara MailButler. N'adịghị ka ọtụtụ nyiwe nke ndị ọzọ na-enyocha ma ọ bụ weghara igbe mbata gị, MailButler bụ mgbakwunye na-agbakwunye na Apple Mail n'enweghị nsogbu. Ọ dị oke mma na Apple ga - ejide ụlọ ọrụ a ma gbakwunye atụmatụ ndị a na ndabara.
Kpoo - Site na imekpu email ị ga - eme nwa oge ka ọ pụọ na Igbe mbata gị.
Ndepụta - Mee ka ị mara ma ọ bụrụ na onye nnata ahụ emepela email gị n’ezie. Nke a bụ ngwa dị egwu maka ndị mmepe azụmaahịa na-ahụ ma atụmanya mepere ntinye ha ma ọ bụ email ha.
usoro ihe omume - Hazie oge ị ga-eziga gị na otu ụbọchị na oge n'ọdịnihu.
Wepu zipu - Ruo oge ụfọdụ ị nwere ike imeghari nzipu nke email ma mezie mmejọ ndị nwere ike ime.
Nbanye - mepụta akara ngosi email mara mma site na ịhọrọ n'etiti ndebiri ha dị iche iche.
Upgwé ojii Bulite - MailButler na-akpaghị aka na-ebubata mgbakwunye faịlụ buru ibu na igwe ojii ma na-agbakwunye njikọ kwekọrọ na ozi gị.
Ihe Ncheta Mgbakwunye - Echefula ịgbakwunye faịlụ na ozi ọzọ ị kwuru na ederede ozi.
Ihe oyiyi Avatar - Site na MailButler onye zitere email nwere ike ịhụ ngwa ngwa site na onyonyo eserese ha mara mma.
Direct Igbe mbata - Nweta igbe igbe gị a na - ejikarị eme ihe na nri menu - pịa otu ebe site na ebe niile
Emojis - Ndị obere mma akara ngosi ndị bụ akụkụ nke nkwukọrịta ọgbara ọhụrụ… ugbu a na ozi ịntanetị, kwa.
Wepu aha ya - MailButler na-eme ka ọ dị mfe karịa ka ọ bụla ịmepụ aha na akwụkwọ ozi achọghị: Otu pịa!
Nke a bụ otu ụzọ nke dị mfeMailButler usoro ihe omume. Otu n'ime njirimara m hụrụ n'anya bụ na ọ na-akwado ntọala ikpeazụ m - yabụ enwere m Businessbọchị azụmahịa na-esote na 8: 00AM. Nke a dị mma n'ihi na anaghị m echebara ndị mmadụ echiche na m na-aza email ha na 2: 48 AM, heh.
MailButler Atụmatụ na-abịa
ihe aga-eme - Kaa ozi ịntanetị gị dị ka ihe ị ga-echefu banyere ọrụ ndị dị mkpa ọzọ.
Igbe mbata - Nwee ezumike, nwee MailButler: Gbanyụọ ụfọdụ akaụntụ email na-akpaghị aka dabere na oge ọrụ gị.
quote - Kesịa ngwa ngwa zigara ozi email na ngwa ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ.
Giphy - Site na MailButler ị nwere ohere ịnweta trazillion animated oyiyi iji gosipụta onwe gị nke ọma.
Wụnye MailButler maka n'efu!
Obi dị m ezigbo ụtọ na MailButler nwere Igbe mbata atụmatụ n'okpuru mmepe. Ọtụtụ oge anyị na-enweta ozi ịntanetị abalị site n'aka ndị ahịa na arịrịọ anyị na-awụli elu. Ọ bụghị na anyị achọghị ịzaghachi, mana anyị na-azụkarị ndị ahịa anyị na ha nwere ike ijikọ anyị oge ọ bụla n'ehihie ma ọ bụ n'abalị… ọ bụghị nnukwu omume ebe ọ bụ na anyị abụghị ngalaba nkwado. Ọ ga-akara m mma ịkwụsị ịnweta ozi ịntanetị ruo ụbọchị azụmahịa na-esote. Ndị ahịa anyị nwere ike ịnwe ihe mberede nwere ike ịkpọ anyị mgbe niile.
Ngosipụta: Ana m eji njikọ ozi m na post ahụ na-atụ anya na otu nke gị wụnye ma kwụọ ụgwọ maka ọrụ ahụ ma enwere m ike ịnweta ya n'efu! 🙂
Tags: akwụkwọ ozi apụlapụl ozi ígwé ojiiapụl ozi emojisapple mail usoro ihe omumeapụl ozi nsusoapple mail wepu aha yaemailigbe efumailonye na -eziga ozi